Ra’iisul Wasaare Kheyre “Inta aan anagu joogno xukunka, waxaan idiin balan qaadayaa in aanan aqbali doonin in nala cabsiiyo” | Baydhabo Online
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo xalay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar la hadlayay ayaa hoosta ka xariiqay in Jaaliadda looga baahanyahay iney ka qeyb qaataan dib u dhiska iyo Horumarka ka socda dalka, waxaana uu warbixin ka siiyey xaaladdaguud ee Dalka iyo Horumarada Dowladdu ay ka sameysay dhinacyada Amniga, ladagaallanka musuq Maasuqa, Koboca dhaqaalaha iyo qodobo kale oo muhiim ah.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada FS ayaa sheegay in dawladda Qatar ay wada gaareen heshiisyo waaweyn oo kor loogu qaadayo horumarka iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha.
Waxaa uu sheegay Ra”iisul Wasaare Khayre in la bilaabayo inta aanu sanbadkan dhamaan dhismaha wadooyinka Muqdisho ku xira Afgooye iyo Jowhar, ayna ku xigi doonaan dhismaayasha Wasaaradda Qorshaynta, xarunta Xisbiga iyo mashaariic kale.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo la hadlaayay Jaaliyadda Somaliyed ee dalka Qatar ayaa yiri. “Inta aan anagu joogno xukunka, waxaan idiin balan qaadayaa in aanan aqbali doonin in nala cabsiiyo, inaan aqbali doonin in dariiqa saxda ah nala ka leexiyo, in aanan aqbali doonin in nala yiraahdo nala shaqeysta haddii kale waan idinka ridayna, inta aan anagu madaxna nahay anigoo ku hadlaayo kayga iyo kan Madaxweynaha JFS waxaan idiin sheegi doonaa Sharafta aan raadinayno kama raadinayno Qab qablayaal ee waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed”.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa intaa ku daray in Qatar iyo Soomaaliya si dhaw isaga kaashanayaan dhinacyada gaadiidka cirka iyo dhulka, taas oo wax wayn ku soo kordhinaysa dhaqaalaha Soomaaliya.